Genesisi 33 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jakobho anosangana naIsau (1-16)
Jakobho anoenda kuShekemu (17-20)
33 Jakobho akabva asimudza musoro akaona Isau achiuya aine varume 400.+ Saka akakamuranisa vana pakati paReya, Rakeri, nevarandakadzi vaviri.+ 2 Akaisa varandakadzi nevana vavo pamberi,+ pachizotevera Reya nevana vake,+ Rakeri+ naJosefa vari shure kwavo. 3 Iye pachake akabva aenda mberi kwavo akakotama kanomwe kusvikira ava pedyo nemukoma wake. 4 Asi Isau akamhanya kuzosangana naye, akamumbundira, akamutsvoda, vakatanga kuchema. 5 Paakasimudza musoro akaona vakadzi nevana, akati: “Ava vauinavo ndivanaani?” Iye akapindura kuti: “Vana vakapiwa muranda wenyu naMwari.”+ 6 Varandakadzi vacho vakabva vauya mberi pamwe nevana vavo vakakotama, 7 uye Reya akauyawo mberi nevana vake, vakakotama. Josefa akazouyawo mberi naRakeri, vakakotama.+ 8 Isau akati: “Watumireiko boka rese iri revanhu randasangana naro?”+ Iye akapindura kuti: “Ndati ndinzwirwe nyasha naishe wangu.”+ 9 Isau akabva ati: “Ndine zvinhu zvakawanda kwazvo munin’ina.+ Chengeta hako zvinhu zvako.” 10 Asi Jakobho akati: “Aiwa kani. Kana mandinzwira nyasha, torai chipo chandiri kukupai, nekuti ndauya nacho kuti ndikwanise kuona chiso chenyu. Uye ndaona chiso chenyu sekunge ndiri kuona chiso chaMwari, pakuti manditambira nemufaro.+ 11 Ndapota, torai chipo chinoratidza mufaro wangu chandakuunzirai,+ nekuti Mwari akandinzwira nyasha uye ndine zvese zvandinoda.”+ Akaramba achimuteterera kusvikira achitora. 12 Isau akazoti: “Ngatibvei pano tiende. Rega ini nditungamire.” 13 Asi akati kwaari: “Ishe wangu anoziva kuti vana vachiri vadiki+ uye ndine makwai nemombe zviri kuyamwisa. Kana zvikaswera zvichimhanyiswa, zvinofa zvese. 14 Ndapota, ishe wangu ngaaende mberi kwemuranda wake, asi ini ndichasimudzira nerwendo zvishoma nezvishoma maererano nekufamba kwezvipfuwo zvangu nekwevana, kusvikira ndasvika kunashe wangu kuSeiri.”+ 15 Isau akabva ati: “Ndapota, rega ndikusiyire vamwe vanhu vangu.” Iye akati: “Muchidarirei zvenyu? Ishe wangu ngaangondinzwira nyasha chete.” 16 Saka zuva iroro Isau akadzokera kuSeiri. 17 Jakobho akabva ipapo akaenda kuSukoti,+ akazvivakira imba, akagadzirira zvipfuwo zvake matumba. Ndokusaka akatumidza nzvimbo yacho kuti Sukoti.* 18 Paakabva kuPadhani-aramu,+ Jakobho akasvika zvakanaka kuguta reShekemu+ munyika yeKenani,+ uye akadzika musasa pedyo neguta racho. 19 Akabva atenga nzvimbo nemasirivha 100+ kuvanakomana vaHamori, baba vaShekemu, achibva adzika tende rake munzvimbo iyoyo. 20 Akavaka atari ipapo, akaitumidza kuti Mwari ndiMwari waIsraeri.+
^ Kureva kuti “Matumba.”